SingForYou.net - Ko Yat Htar Nay
Ko Yat Htar Nay
Tags : ကိုယ့်ရပ်ဌာနေ အလွမ်းပြေ ပါ....
By : koaungkhaing on May 16, 2010
Score: 89 Rating: 4.94 Comments: 21
Ko Yat Htar Nay's Description
မြို့ကလူက တောရပ်ကို နိုင်ငံခြားရောက်နေသူက ကိုယ့်နိုင်ငံကို လွမ်းတဲ့ သီချင်းလေးပါ..အထူးသဖြင့် မနေ့ညက ကွယ်လွန်သွားသူ ဦးသုမောင်အား လေးစားစွာဖြင့် အမှတ်တရ ..ရင်ထဲက အသံနဲ့ သီဆိုလိုက်ပါတယ်..
naingwin04 on Jul 4, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးကို တအားကြိုက်ပါတယ်.....နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အတွက် Heart ထိတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ.....ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှ မဆိုဖူးဘူး......အစ်ကိုကြီး အောင်ခိုင်ဆွေကို အားကျလို့ ဆိုကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်.......
thant on May 17, 2010 0
O.U Thu Mg sone thwar pye!........akhu mha bae thi tal bro gyi yay........sate ma kg chin gyi swar nae.......narr sin thwar par tal.........aso ka kg lite tar bro gyi yay...........*********
hippo on May 17, 2010 0
အရမ်းကို နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင့် ... **********************************
turikimuriki on May 17, 2010 0
wow... so nice2listen par ... taw ko lwan lar pi ... **********
Ilovemusic on May 17, 2010 0
really nice one par..koAK..narr sin,,,arr pay twar par tel....5*4u par.
pusuu on May 17, 2010 0
bro yay....sis pusuu ka always nar sin nay par tae bro's songs tway ko.......ayan kg lot ......************
Rosies on May 17, 2010 0
good par del shint bro yay 5******************
dimpleminle on May 17, 2010 0
nice singing...arr pay nar sin twer par tal shinn...5*****
nayyarthit01 on May 17, 2010 0
ကိုအောင်ခိုင်ရေ ညီလေးလာအားပေးသွားပါတယ်ဗျာ ဦးသုမောင်ဆုံးသွားပေမယ့် ကိုအောင်ခိုင် ကျန်ပါသေးတယ် :D အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ဆိုသွားတာ :*******
chitmoe2009 on May 17, 2010 0
brownlay on May 17, 2010 0
KoAK so htar dar ayann nar htaung lo. kg par dal..... ***************!
songlover015 on May 17, 2010 0
whitekisslay on May 17, 2010 0
Nar sin loayan kg te classical myanmar thichin lay par Bro .....thee so twer tar imatan ko kaung mon lite phet par tal....******:)
snowgirl on May 17, 2010 0
;clap; ;clap; song lay yaw voice yaw palayan ko perfect par pal shin :)dkal ko kg dar par,,,arr pay thwar par dal shin *******
gracelad on May 17, 2010 0
U Thu Maung gyi sone shar pyi pot lay..ayan ko hna myaw phoe kg hla bar del......................Ko AK ka dot kya ma atwet always saunt hmyaw arr pay nar sin ya de asoshin bar.i like so much.*******************4 u
soramoe on May 17, 2010 0
ဦးသုမောင် ဆုံးရှာပြီ . မလွယ်တဲ့ မြန်မာသံဆိုနိုင်တာ လေးစားပါတယ် KoAK
susu23 on May 17, 2010 0
nice to sing bro KAKyay arr pay thwar par tel shin*************
susannyunn on May 17, 2010 0
ဦးဦးသုမောင် ဆုံးရှာပြီလားချင် ??:((((( ဒီသီချင်းလေးကို အရမ်းရမ်းကြိုက်တယ် ဦးဦးရယ် :atb >>> နားထောင်ရင်းနဲ့မျက်ရည်များတောင်လည်မိရပါတယ်:(((( စူစန် ဆို ဖိုကြိုးစားနေတာခုထိကိုမအောင်မြင်တေးပါပူး :no ဆိုတော့ဆိုကျင်ပါတေးတယ်ချင် :yes >>>> ခုတော့ဦးဦး ဆိုထားတာလေးကိုပဲအားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ချင့် ဘရာဗိုဗိုဗို*************************************************************************************************>>>>
greenlay on May 17, 2010 0
သရီးအင်ဝမ်း အသံပိုင်ရှင် အကိုကြီးရေ ကောင်းပါ့ရှင် ၅*
naymakha on May 17, 2010 0
မြန်မာသံဆိုနိုင်တာ လေးစားပါတယ် အခုလို Piano နဲ့ ဆိုနိုင်ဖို့ မလွယ်တဲ့ ဟာပါ bro.... တကယ်ပါ... ညက်၇ည်တွေတောင် ၀ိုင်းအိုင်းအိုင်းလာတယ်... (မျက်ရည်လည်အောင်လုပ်ရက်သူကြီး)